Umsebenzisi wenza uhlobo "lwekhadi" i-AirTag ukuze igcinwe kwisipaji sakhe | Ndisuka mac
Into yokuqala endiyenzileyo xa ndivula ibhokisi ye I-AirTag kukubona ukuba angayigcina kwisipaji sakhe. Ityebile kakhulu, ndacinga. Kwaye ekugqibeleni, kuye kwagqitywa ukuxhoma kwizitshixo zendlu. Ndicinga ukuba iyafana into yokuba umntu okrelekrele ucinga, ngobuchule ngakumbi kuneseva, kunye nomshicileli we-3D.
Emva koko sinokubona indlela uAndrew Ngai ayidibanise ngayo i-AirTag, wayibeka kwikhadi leplastiki, kunye nebhetri eyahluliweyo. Ke, ikwazile ukunciphisa ubukhulu ukuya 3,8 mm., ekuvumela ukuba uyigcine kwisipaji njengalo naliphi na ikhadi lekhredithi. Ndiyathemba ukuba eCupertino bayaqaphela.
I-tracker entsha ka-Apple incinci kwaye ilula, kodwa iseyinyani kakhulu kwabo bafuna ukuyiphatha esikhwameni. Kuba iApple ibonelela ngeAirTag kuphela ngokhetho olunye lobeko UAndrew Ngai Ugqibe kwelokuba enze eyakhe inguqulelo encinci ukuze ayigcine kwisipaji sakhe njengekhadi letyala. Kwaye kunjalo kukususa umnqwazi, bukela ubuchule obunabo umntwana.
Into eyenziweyo ibikukukhupha ibhodi yomama kwityala leplastiki, kwaye indlu ibhetri ngokwahlukeneyo ukunciphisa ubukhulu. Okunye kwakulula. Uthathe imilinganiselo yebhodi kunye nebhetri, kwaye wakha ikhadi kuye 3D iphrinta ngezi zindlu zimbini ziyimfuneko ukuze zilingane ezi zinto zimbini.
Nantsi indlela yakhe «Ikhadi lomoya»Nge-3,8 mm kuphela. ityebile, isebenza ngokupheleleyo kwaye iyasebenza, enokugcinwa ngokulula ngaphakathi kwesipaji sepokotho, kunye namanye amakhadi etyala.
Mhlawumbi eCupertino sele beyibona yokuzonwabisa, kwaye okwethutyana siza kubona iKhadi le-AirTag ukuba siyiphathe kwisipaji. Ingayinto eqhelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Umsebenzisi wenza uhlobo "lwekhadi" i-AirTag ukuze igcinwe kwisipaji